लगानी गर्ने हैन ? सानिमा लाईफकाे आईपीओ आजबाट खुल्याे – Esewanews
Home / Headline / लगानी गर्ने हैन ? सानिमा लाईफकाे आईपीओ आजबाट खुल्याे
लगानी गर्ने हैन ? सानिमा लाईफकाे आईपीओ आजबाट खुल्याे
Shivaram Khadka Headline, अर्थ Leaveacomment 5640 Views
ज (साउन २० गते, बुधबार) देखि सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेकाे छ ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरले ६० कराेड रूपैयाँ बराबरकाे ६० लाख कित्ता आईपीओ बिक्री खुल्ला गरेकाे हाे । जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख कित्ता कर्मचारीहरुलाई र ५ प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषहरुलाई सुरक्षित गरी बाँकी ५४ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई छुट्याइएकाे छ ।
२० श्रावण २०७८, बुधबार ०१:५३